The Faceless Man (2019) | MM Movie Store
မကျြနှာမဲ့သရဲကွီး ဒီကားက သာမာနျကားမြိုးတော့မဟုတျဘူးဗြ…ဘာသာပွနျတောငျ ဘာသာမပွနျခငျြလောကျအောငျ လူကိုအတျော စိတျညဈညူးအောငျလုပျနိုငျတဲ့ သရဲကားဗြ…အရမျးကွောကျဖို့ကောငျးလှနျးလို့လညျး ratingအရမျးနညျးတာထငျတယျ
ကဲ ဒီတော့ ညှနျးပေးရရငျ horrorထဲမှာ တျောတျောလေးကွောကျစရာကောငျး ၊စိတျညဈညူးစရာကောငျးတဲ့ ကားမြိုးကွညျ့ခငျြရငျ ဒီကားက ခငျဗြားအတှကျ လုံးဝကှကျတိပါပဲ။ ဇာတျလမျးအကဉျြးခြုပျကတော့ ကငျဆာရောဂါရနတေဲ့ ကောငျမလေးကို တဈခြိနျလုံးနောကျယှကျနတေဲ့ သရဲကွီးရှိတယျဗြ…
တဈနတေ့ော့ အဲ့ကောငျမလေး အားလပျရကျ နယျမွို့လေးတဈခုကို သူ့သူငယျခငျြးတှနေဲ့ အတူ ခရီးထှကျတော့…သူ့နဲ့အတူပါလာတဲ့ ကောငျလေးတှကေ မာဖီးယားတှဆေီကနေ ကိုကိနျးထုတျကွီး ခိုးလာခဲ့ပါတယျ… အဲ့တော့ မာဖီးယားတှကေလညျး သူတို့ဆီကနေ ကိုကိနျးထုတျကွီးကို ပွနျအရယူဖို့ကွိုးစားကွတာပေါ့….
နောကျထပျ အဲ့မိနျးကလေးအတှကျ ကံဆိုးခငျြတော့ သူ့ရဲ့သူငယျခငျြးအုပျစုထဲမှာ…ကှငျးဆကျလူသတျသမားကပါလာသေးတယျ ကဲကဲ ဒီလောကျဆို ဘယျလောကျအထိအဖွဈဆိုးမလဲဆိုတာ ရိပျမိပွီထငျတယျ…မာဖီးယား…သရဲနဲ့ လူသတျသမားတို့ရဲ့ လကျထဲကနေ အဲ့ကောငျမလေး လှတျနိုငျမလား မလှတျဘူးလားတော့ ဒေါငျးပွီးကွညျ့လိုကျကွပါ
မျက်နှာမဲ့သရဲကြီး ဒီကားက သာမာန်ကားမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးဗျ…ဘာသာပြန်တောင် ဘာသာမပြန်ချင်လောက်အောင် လူကိုအတော် စိတ်ညစ်ညူးအောင်လုပ်နိုင်တဲ့ သရဲကားဗျ…အရမ်းကြောက်ဖို့ကောင်းလွန်းလို့လည်း ratingအရမ်းနည်းတာထင်တယ်
ကဲ ဒီတော့ ညွှန်းပေးရရင် horrorထဲမှာ တော်တော်လေးကြောက်စရာကောင်း ၊စိတ်ညစ်ညူးစရာကောင်းတဲ့ ကားမျိုးကြည့်ချင်ရင် ဒီကားက ခင်ဗျားအတွက် လုံးဝကွက်တိပါပဲ။ ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းချုပ်ကတော့ ကင်ဆာရောဂါရနေတဲ့ ကောင်မလေးကို တစ်ချိန်လုံးနောက်ယှက်နေတဲ့ သရဲကြီးရှိတယ်ဗျ…
တစ်နေ့တော့ အဲ့ကောင်မလေး အားလပ်ရက် နယ်မြို့လေးတစ်ခုကို သူ့သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ အတူ ခရီးထွက်တော့…သူ့နဲ့အတူပါလာတဲ့ ကောင်လေးတွေက မာဖီးယားတွေဆီကနေ ကိုကိန်းထုတ်ကြီး ခိုးလာခဲ့ပါတယ်… အဲ့တော့ မာဖီးယားတွေကလည်း သူတို့ဆီကနေ ကိုကိန်းထုတ်ကြီးကို ပြန်အရယူဖို့ကြိုးစားကြတာပေါ့….
နောက်ထပ် အဲ့မိန်းကလေးအတွက် ကံဆိုးချင်တော့ သူ့ရဲ့သူငယ်ချင်းအုပ်စုထဲမှာ…ကွင်းဆက်လူသတ်သမားကပါလာသေးတယ် ကဲကဲ ဒီလောက်ဆို ဘယ်လောက်အထိအဖြစ်ဆိုးမလဲဆိုတာ ရိပ်မိပြီထင်တယ်…မာဖီးယား…သရဲနဲ့ လူသတ်သမားတို့ရဲ့ လက်ထဲကနေ အဲ့ကောင်မလေး လွတ်နိုင်မလား မလွတ်ဘူးလားတော့ ဒေါင်းပြီးကြည့်လိုက်ကြပါ